EU-CSO Partnership Strategy Newsletter: Issue2- European External Action Service
EEAS > Myanmar (Burma) > EU-CSO Partnership Strategy Newsletter: Issue 2
The EU-CSO Partnership Strategy was launched in April 2019 to support, protect and promote civic space in Myanmar. Read the second issue of the EU-CSO Partnership Strategy Newsletter to be informed about news, upcoming events, and funding options for civil society organisations in Myanmar.
Read the newsletter : newsletter_second_issue_myanmar.pdf
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်များ၏ ထုတ်ပြန်ချက်ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် တိုက်ပွဲအရှိန်မြင့်လျက်ရှိပြီး အရပ်သားများနေရပ်စွန့်ခွာရခြင်း၊ အသက်ဆုံးရှုံးရခြင်းများကိုသိရှိရပြီး အခြားသောဒေသများတွင်လည်း ပဋိပက္ခအလားအလာများကို ကြားသိရသည့်အတွက် အမှန်ပင်စိုးရိမ်မိပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ နိုင်ငံများအားလုံးအနေဖြင့် Covid-19ရောဂါ၏
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူေစျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္တြင္းရွိ ဥေရာပသမဂၢ၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢသံအမတ္ၾကီး ၊ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၀င္နိုင္ငံမ်ားမွ သံအမတ္ၾကီးမ်ားနွင့္ သံရံုးအၾကီးအကဲမ်ားမွ ေအာက္ပါသေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေၾကညာလိုက္သည္ ။
ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့၏ အဆင့်မြင့်အရာရှိများ မူဝါဒဆွေးနွေးပွဲပြည်ထောင်စုပညာရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး Kristian Schmidt တို့က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် မူဝါဒဆွေးနွေးပွဲကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါသည်။